सीमा विवाद सडकमा नाचेर समाधान हुन्न, प्रमाण सहित तत्काल कुटनीतिक पहल आवश्यकः अध्यक्ष मण्डलका सदस्य यादव
By vijayafm on	 November 17, 2019 कोरोना अपडेट, देश, राजनीति, स्थानीय
डोलराज रानाभाट, गैडाकोट,१ मंसिर । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राज किशोर यादवले सीमा विवाद विरोध कार्यक्रम गरेर समाधान नहुने बताउनुभएको छ ।
बिजय एफएमको कार्यक्रम आजको सवालमा कुराकानी गर्दै यादवले अहिले नेकपा, काँग्रेस लगायतका दलहरुका विभिन्न भातृसंस्थाले गरेको विरोधलाई वेमौसमी नृत्यको संज्ञा दिँदै सीमा विवाद नितान्त्र कुटनीतिक पहलबाट मात्रै समाधान हुने भएकाले केपी शर्मा ओली सरकारलाई आफ्नो पार्टीले त्यही सुझाव दिएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओली दुई तीहाइ जनमतका साथ सरकार नेतृत्व गरेकाले सीमा विवाद समाधानको पहल उहाँले गर्नुपर्ने बताउँदै आवश्यक सहयोग गर्न राष्ट्रिय जनता पार्टी तयार रहेको बताउनुभयो ।
मधेशवादी दलहरु सीमा विवादमा मौन वसेको भनी लगाएको आरोप निराधार रहेको भन्दै केही दल र मिडियाले आफूहरुलाई यस्तो आरोप लगाएको बताउनुभयो । हामीहरु नेपालको राष्ट्रियता, अखण्डता र एकताका लागि सधैँ अग्रस्थानमा रहने भन्दै नेपालको एक ईन्च भूमि पनि गुम्न नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । अहिले विरोधबाट नभई यथेष्ट प्रमाण सहित कुटनीतिक पहलबाट समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गर्नुभयो ।
केही व्यक्तिहरुले जनतालाई भ्रम सृजना गरेर राजनीति गरेको भन्दै भित्री एउटा कुरा र वाहिर अर्कै कुरा गर्ने वानीले देशेको सीमा विवाद वर्षेनी समाधान नभएको वताउनुभयो । सीमा विवादलाई राजनीतिबाट टाढा राखेर समाधान खोज्न सके कहिल्यै विवाद नहुने गरी समाधान हुने उहाँको ठोकुवा थियो ।
अहिले काँग्रेसले विरोध गर्नुको कुनै तुक नरहेको बताउँदै उसैको पालामा र काँग्रेसभन्दा पहिला देखिनै सीमा सम्वन्धित सम्झौता भएको भन्दै विरोध गरेर राष्ट्रवादी नवन्न उहाँको सुझाव थियो । सरकार वाहिर रहेकाले हाम्रो प्रत्यक्ष पहल गर्न नसकिने भएकाले अहिले सरकारको सक्रियता हेरेको बताउनुभयो ।
विपक्षी दल काँग्रेसका सभापति शेर वहादुर देउवाले राजदुतलाई फोन गरेर लिपुलेक नेपालको हो भन्नुभयो तर तपाईहरुले त केही प्रतिकृया गर्नुभएन नि भन्ने प्रश्नमा कडा उत्तर दिँदै यादवले तपाईलाई के थाहा उहाँले प्रधानमन्त्री वनाइदिनुस पो भन्नुभयो की ? राजदुतलाई फोन गरेर समाधान हुने विषय हो यो ? त्यसैले विरोधले विगतमा झन समस्या सृजना गरेको र अव एक मात्र वाटो भनेकै कुटनीतिक पहलवाट समाधान खोज्नु हो उहाँको भनाई थियो । उप निर्वाचनमा केही मत पाईन्छ की भनेर सीमा विवादलाई राजनीति गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै यादवले विरोधका नाउँमा वातावरण नविगार्न सवैमा आग्रह गर्नुभयो ।
भारतले लिपुलेक सहितलाई समेटर नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै विरोध जारी छ । यही वीचमा मेधशवादी दलहरु सिमा विवादमा मौन वसेको आरोप पनि लागेको छ खासमा सीमा विवादलाई मधेशवादी दलहरुले कसरी लिएका छन् न ? कुराकानी गर्दै राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादव
Posted by Vijaya FM on Saturday, 16 November 2019